Lammileen Afrikkaa Chaayinaa keessatti Dararamaa jiran - NuuralHudaa
Lammileen Afrikkaa Chaayinaa keessatti Dararamaa jiran
Barattootaa fi hojjettoonni lammiileen Afriikkaa biyya Chaayinaa keessa magaalaa Guwaang’zhuu(Guangzhou) jedhamtu jiraatan sababa ‘dhibee Koroonaa-vaayras facaastan’ jedhuun mana keessa jiraatan irraa ari’amuun dhagahame.
Lammiileen Afriikkaa kunneen yeroo ammaa mana kireeffatan keessaa ari’amuun alatti aduufi roobaaf saaxilamaa jiraachuun gabaafame.
Ajaja qondaaltota mootummaa irraa kennameenis tajaajila mana nyaataa fi dhugaatii dhoorkamuun cinatti, dirqiin dhibee Koroonaa-vaayras qoratamaa jiraachuu himan.
Dhukkuba kanarraa yoo bilisa tahanillee iddoo namoonni dhibee kanaan shakkaman guyyoota 14 tursiifaman dirqamaan tahuu fi Dhihoo tana qondaaltota mootummaa Chaayinaa irraa qajeelfamni “namoonni lammiilee Afriikkaa waliin qunnamtii qabdan kophaa akka if baastan, akka qoratamtan!” jedhu kan labsame tahuu AP gabaase.
Ka’umsi tarkaanfii kanaa, eegaa torbaan dabre keessa lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii magaalatti keessatti dabaluun ibsameen booda.
Akkasuma eega odeyfannoon sobaa “weerarri dhibee Koroonaa Vaayiras marsaan 2ffaan Afriikkaanotaan kahuufi” jettu magaala keessa facaate booda yoo tahu, kun immoo lammiilee Afriikkaa dararaaf saaxilaa jiraatuu gabaafame.
Kanuma hordofuun biyyoonni Afriikkaa Gaanaa, Keeniyaa fi Naayijeeriyaan gochi raawwatamaa jiru kan isaan dallansiise tahuu Chaayinaaf ibsan.